Akụkọ - MMIRI NA-ANA-AZ V N'VLỌ N'VLỌ NCHE A:
MMIRI NA-eguzogide mmiri VS MMAL WAT-ANAP VTA VS WATERPROOF: G'SN THE B D DB ?R??
Anyị niile na-ahụ ntụaka maka ngwaọrụ ndị na-enweghị mmiri, ngwaọrụ ndị na-eguzogide mmiri na ngwaọrụ ndị na-ere mmiri na-atụba na ngwaahịa eletrọniki. Ajụjụ buru ibu bụ: Kedu ihe dị iche? Enwere otutu ederede edere n'isiokwu a, mana anyị chepụtara na anyị ga-atụba na ọnụọgụ abụọ anyị ma lebakwuo anya na ọdịiche dị n'etiti okwu atọ a, na-elekwasị anya na ụwa nke ngwaọrụ.
Nke mbu, ka anyi bido site na nkowa okwu di nkowa banyere akwukwo na-egbochi mmiri, mmiri na-eguzogide mmiri, na mmiri na-asọ mmiri, dika Oxford English Dictionary nyere:
Mmiri na-eguzogide mmiri: nwere ike iguzogide ịbanye mmiri ruo n'ókè ụfọdụ ma ọ bụghị kpamkpam
Ihe na-egbochi mmiri: ọ naghị adị mfe ịbanye na mmiri, karịsịa n'ihi mmeso a na-emeso ya maka nzube dị otú ahụ na mkpuchi elu
Waterproof: enweghị mmiri
Gịnị Ka Mmiri Na-eguzogide Mmiri Pụtara?
Mmiri na-eguzogide bụ ọkwa kachasị dị na nchebe mmiri nke atọ. Ọ bụrụ na akpọrọ ngwaọrụ dị ka mmiri na-eguzogide mmiri ọ pụtara na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya nwere ike wuru n'ụzọ nke na ọ na-esiri mmiri ike ịbanye n'ime ya, ma ọ bụ ikekwe na ejiri ihe dị mfe nke na-enyere aka melite Ohere nke ngwaọrụ ịlanarị ihu na mmiri. Mmiri na-eguzogide mmiri bụ ihe ị na-ahụkarị n'etiti nche, na-enye ya ike iguzogide nkezi ịsa aka gị ma ọ bụ ịcha mmiri ozuzo.
Gịnị Ka Mmiri Na-asọpụta Mmiri Pụtara?
Mmiri mmiri ihe mkpuchi bụ isi dị nnọọ elu site na mkpuchi mmiri na-eguzogide mmiri. Ọ bụrụ na akpọrọ ngwaọrụ dị ka ihe na-egbu mmiri, ọ nwere ihe onwunwe, nke ị chere, weghachite mmiri na ya, na-eme ya hydrophobic. Ngwaọrụ na - egbochi mmiri nwere ohere dị ukwuu iji kpuchie ya na ụdị ụfọdụ nke nanotechnology dị obere, ma nke ahụ dị n'ime, n'èzí, ma ọ bụ ha abụọ, ma nwee ohere ka mma iguzo na mmiri karịa ngwaọrụ gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azọrọ na mmiri na-asọ oyi, mana okwu a na-arụrịta ụka n'ihi na mmiri na-adịgide adịgide dị ụkọ na n'ihi ajụjụ niile na enweghị ike ịkọwa amụma metụtara ya.
Gịnị Ka Mmiri Na-enweghị Pụtara?
Waterproof si Nkọwa mara mma nke ọma, mana echiche dị n’azụ ya abụghị. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ọkọlọtọ ụlọ ọrụ guzobere iji kwalite ngwaọrụ dị ka mmiri na-adịghị. Ihe kacha dị ugbu a, dị ka ọkwa ọkwa, bụ Nlekọta Nchedo Ntuzi ọnụ ọgụgụ (ma ọ bụ IP Code). Ọnụ ọgụgụ a na-ekenye ihe akara site na 0-8 maka etu ngwaọrụ ahụ si dị irè gbochie mmiri ịbanye na ya, aka ingress mmiri. N'ụzọ doro anya, enwere otu nnukwu ntụpọ na sistemụ etu esi ele ya anya: Kedu maka ụlọ ọrụ, dị ka anyị ebe a na HZO ndị na-echeghị banyere idebe mmiri n'ime ngwaọrụ iji zọpụta ya na mmebi mmiri? Ihe mkpuchi anyị na-eme ka mmiri dị n'ime ngwaọrụ, mana ihe na-enweghị mmiri anyị na-ekpuchi ngwaọrụ na-echebe ha pụọ ​​na nsogbu ọ bụla nke mmebi mmiri. Companieslọ ọrụ ndị a na-enye ọrụ nke na-adabaghị na ihe IP n'ọtụtụ, ma ka na-ejikwa nye azịza maka ndị ahịa ahụ chọrọ ichebe onwe ya pụọ ​​na mmiri ozuzo na “ọnwụ site n'ọnụ ụlọ mposi.”
Iji okwu a na-egbochi mmiri nwekwara ike bụrụ ihe dị egwu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nke a bụ n'ihi na okwu a na - egbochi mmiri na - enyekarị echiche na nke a bụ ọnọdụ na - adịgide adịgide, na na ihe ọ bụla e mere ka ‘mmiri ghara igbochi’ agaghị ada ada n’ihi ịkpọtụrụ mmiri – n’agbanyeghi ọnọdụ ahụ.
Post oge: Sep-10-2020